उचित उपासना, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
हाम्रो उचित उपासना
“दाज्यू-भाइहरू र दिदी-बहिनीहरू, अब म तपाईंलाई परमेश्वरको दयाद्वारा आग्रह गर्दछु कि तपाईले आफ्नो शरीरलाई जीवित, पवित्र र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने बलिदानको रूपमा दिनुहोस्। यो तपाईको समझदार उपासना सेवा हो » (रोमी १२: १ लाई पत्र) यो उपदेशको विषय हो।
तपाईंले सही रूपमा याद गर्नुभयो कि एक शब्द हराइरहेको छ। बाहेक बढी व्यावहारिक उपासना, हाम्रो उपासना एक छ अधिक तार्किक , यो शब्द ग्रीक "तर्क" बाट आएको हो। परमेश्वरको सम्मानमा सेवा तार्किक, व्यावहारिक र अर्थपूर्ण छ। म किन व्याख्या गर्छु।
मानव दृष्टिकोणबाट, हामी सबै मानवीय तर्कको साथ हेर्दछौं। उदाहरणको लागि, यदि म परमेश्वरको सेवा गर्छु भने, म उहाँबाट केही आशा गर्न सक्छु। भगवानको तर्क धेरै फरक छ। भगवानले तपाई र मलाई बिना शर्त माया गर्नुहुन्छ। भगवानको दृष्टिकोण अनुसार तार्किक सेवा भनेको हामी मानवलाई माया गर्ने सेवा हो, योबिना हामीले यो कमाउन सक्दैनौं। र मेरो पूजा? ऊ मात्र परमेश्वरलाई आदर गर्नु पर्छ। मेरो आराधनाले उनको महिमा गर्नु पर्छ र उहाँलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ। पावलले ठीक त्यहि सेवालाई बोलाउँदछन् व्यावहारिक र तार्किक , एक अनुचित तर्कसंगत उपासना हुनेछ meine अग्रभूमि मा व्यक्तिगत चासो र मेरो गर्व राख्नुहोस्। म आफैंको सेवा गर्छु। त्यो मूर्तिपूजा हुनेछ।
तपाईंले येशूको जीवनलाई हेरेर तार्किक आराधना अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। उसले तपाईंलाई एकदम राम्रो उदाहरण दियो।
परमेश्वरको पुत्रको जीवित उपासना
पृथ्वीमा येशूको जीवनले परमेश्वरलाई एक्लै महिमा दिन, उहाँको पिताको इच्छा गर्न र हामीलाई मानव जातिको सेवा दिनको लागि विचार र कार्यहरूले भरिएको थियो। अद्भुत रोटी गुणाका साथ, येशूले रोटी र माछाले हजारौंको भोक मेटाउनुभयो। येशूले भोकालाई सचेत गराउनुभयो साँचो भोजन भेट्टाउन जुन उनीहरूको आध्यात्मिक भोकलाई सदाका लागि सन्तुष्ट पार्नेछ। तपाईंलाई परमेश्वर र उहाँको राज्यको लागि सचेत गराउन र चम्काउनको लागि येशूले यो चमत्कार पनि गर्नुभयो। उसको लागि यस अभिलाषाको साथ, उहाँ तपाईंलाई उहाँसँगै बस्न र स्वर्गीय पिताको इच्छामा के गर्न निर्देशन दिनुहुन्छ। उनले हामीलाई आफ्नो व्यावहारिक जीवनको साथ सार्थक उदाहरण दिए। उनले तर्कसंगत वा अर्को शब्दमा, हरेक दिन प्रेम, आनन्द र श्रद्धा बाहिर भगवान, आफ्नो बुबाको सेवा गरे।
येशूको यो तार्किक सेवामा उहाँको जीवनको अन्तमा दुःखकष्टको मार्ग समावेश थियो। ऊ आफैंले कष्ट भोग्नुपर्दैनथ्यो, तर तार्किक सेवाको रूपमा उसको दु: ख परिवर्तनले धेरै व्यक्तिमा के देखाउँदछ। यसले उसको पुनरुत्थानमा ठूलो आनन्द निम्त्यायो र तपाईं त्यसमा भाग लिन सक्नुहुन्छ।
"क्राइष्ट, येशू पहिलो बच्चाको रूपमा उठनुभयो", किनकि यसले १ कोरिन्थी १:1:२:15,23 मा भन्छ!
ऊ वास्तवमै बौर्यो, ऊ बाँच्दछ र आज पनि सेवा गर्दैछ! येशूको जीवन, क्रूसमा उहाँको मृत्यु, उनको पुनरुत्थान र आफ्नो पिताको दाहिने पट्टि उसको जीवन आज पनि हामीहरूका लागि “परमेश्वरको पुत्रको जीवित र तार्किक उपासना” हो। येशूले सधैं आफ्नो बुबाको आदर गर्नुभयो। तपाईं यो बुझ्नुहुन्छ? यो समझले तपाइँमा गहिरो परिवर्तन सुरु गर्दछ।
"त्यसबेला येशूले शुरू गर्नुभयो र भन्नुभयो: हे बुबा, स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, म तपाईंको प्रशंसा गर्दछु, किनकि तपाईंले यसलाई बुद्धिमान र ज्ञानीहरूबाट लुकाउनुभएको छ र न्यून उमेरकालाई प्रकट गर्नुभएको छ"। (मत्ती 11,25।।)
यदि हामी संसारमा ज्ञानी र बुद्धिमान्‌हरूमध्येका हुन चाहन्छौं भने, हामीलाई समस्या हुनेछ। तिनीहरू आफ्नै बुद्धि र बुद्धिका लागि जिद्दी गर्दछन् र परमेश्वरको प्रकाश छुटेका छन्।
यहाँ, हामी नाबालिगको बारेमा कुरा गर्दैछौं। यसको मतलब के हो ती व्यक्तिहरू जसले आफू पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा निर्भर छन् र उहाँकै सहयोगमा निर्भर छन् र आफैले केही गर्न चाहँदैनन् भनेर स्वीकार गर्छन्। राम्रोसँग भन, भगवानका प्यारा बच्चाहरू उसका मनपर्ने छन्। तपाईले आफ्नो जीवन उहाँमा सुम्पनु हुन्छ। तिनीहरू बुझ्दछन् कि येशूले हाम्रो जीवनको साथ, सबैको सेवा गर्नुभयो र अझै हाम्रो सेवा गरिरहनुभएको छ। हामी उहाँसँगै ठूला चीजहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं किनकि हामी परमेश्वरको इच्छा पालन गर्दछौं र उहाँको शक्ति हामीमा काम गरौं।
यसको मतलब यो हो कि यदि तपाईंले आफूलाई परमेश्वरद्वारा सेवा गर्न अनुमति दिनुभएन भने उहाँले तपाईंलाई तपाईंको जीवनमा प्रस्ताव गर्नुभयो, तपाईं अझै उमेरमुनि हुनुहुन्न, उहाँमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुनुहुन्छ। तपाईंसँग इच्छुकताको कमी छ उहाँप्रति नम्र हुन र साहसी भई सेवा गर्न इच्छुक हुन। उहाँको प्रेम सेवा तपाईं, आफ्नो तार्किक सेवा गाएको र ध्वनी बिना तपाईं पारित हुनेछ।
तपाईं पर्खंदै हुनुहुन्छ कि येशू तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ। म विश्वस्त छु कि तपाईंले परमेश्वरको आह्वान सुन्नुहुनेछ। उहाँको समझदार पूजाको अनुग्रहबाट, उहाँ तपाईंलाई पिताले बोलाउनुहुने सबैतिर आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै, हावाको आवाज र हिंस्रक हल्ला जस्तै, तपाईं उसको आवाज सुन्नुहुन्छ। हामी दोस्रो बुँदामा आउँछौं।
हो, हाम्रो प्रिय स्वयं र म फेरि। म यस बयानको साथ कसैलाई पनि सानो बनाउन चाहन्न। यो तथ्य हो कि हामी मध्ये प्रत्येकमा यसमा चमक बिना, स्वार्थी व्यक्ति हो। सानो वा ठूलो। पहिलो, एफिसी २: १ मा पावलले भनेजस्तै उनी आफ्ना पापहरूमा मरेका थिए। धन्यबाद, उसले तपाईंलाई र मलाई उसको आवाज सुन्नुभयो। केवल उहाँको तार्किक आराधनाको माध्यमबाट हामी दोषी र पापको बोझबाट मुक्त हुनेछौं।
मैले सानो बालकको रूपमा मेरो आमाको आवाज सुनें। उनले येशूको अनुहारमा एउटा अनुहार र हृदय दिए। मैले पछि गोल र गलत तरिकाले उसको आवाज सुनें, जबसम्म म, स्वार्थी व्यक्तिको रूपमा, सबै राम्रो आत्माले स्पष्ट रूपमा त्यागेको, उडन्ता छोराको सुँगुर कुण्डमा गएँ र उसलाई शोक गरेँ। यसको मतलब:
मैले आफैलाई भनें, म आफैमा निश्चित छु र कसैको वाहवाही वा हप्काउनु आवश्यक छैन। म मान्यता खोज्दै थिए। परिवारलाई खुवाउन लगभग दिन र रात काम गर्ने, तर त्यसबाहेक मलाई केहि दिन वा अरू दिन जुन मेरो हृदयको अभिलाषा बनायो। अवश्य पनि, सधैं सही कारणका साथ।
मलाई केहि हिलाउन सक्दैन। भगवान बाहेक! जब उसले मलाई ऐना समात्यो, उनले मलाई आफ्नो दृष्टिकोणबाट कस्तो देखिन् भनेर देखाए। दाग र झिम्का। मैले त्यस्ता चीजहरूमा ट्रेड गरेको छु। तपाईं अकल्पनीय हुनुहुन्छ। यी मिसिपेपहरूको बाबजुद प्रभु येशूले मलाई प्रेम गर्नुभयो। कुनै अधिक र कुनै पनि कम। उसको आवाजले मलाई आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित ग .्यो। रातमा काम गरिसकेपछि र बाइबल पढ्दा र दिनको दिनमा काम गर्ने क्रममा उसले मेरो हात समातेर मेरो जीवनलाई मेरो तार्किक उपासनाको रूपमा परिवर्तन गर्न डो guided्यायो। सामान्य जीवनशैली र ध्वनि नगदी दर्ताबाट टाढा, सबै प्रकारका व्यंजनहरूको व्यवसायिक आनंदको लागि प्रतिबद्धताबाट टाढा, यति धेरै हुन सकेन। म मरिसकेका थिए! हामी सबैसँग कुनै न कुनै प्रकारको “स्ट्याकमा फोहोर” छ र हामी केहि अनावश्यक नै छोड्न सक्दछौं। संक्षिप्तमा, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, हाम्रो अहंकार यस्तो देखिन्छ, हामी सबै हाम्रा अपराधहरूमा मरेका थियौं (एफिसी २:१:2,1)। तर भगवान तपाईं र मलाई हामी संग के गर्न सन्तुष्ट हुन ल्याउनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई के गर्न नेतृत्व गर्दछ। तपाईंले पहिलो हातले अनुभव गर्नुहुनेछ के परिवर्तन गर्दछ तार्किक सेवाले तपाईंलाई अग्रसर गर्छ।
मेरो तार्किक सेवा
यो रोमीहरूलाई लेखेको पत्रमा लेखिएको छ। पवित्र आत्माको अगुवाईमा, पावलले ११ अध्यायहरूको अध्याय १२ मा लेख्नु अघि अटल र अविनाशी जोडतोडका साथ लेखेका थिए।
यो पद एक चेतावनी हो र यहाँ र अहिले लागू हुन्छ। हामी अब अनुरोध बन्द गर्न सक्दैन। यो एघार अध्यायमा आधारित छ। ईश्वरले तपाईंको सेवा कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले यी कुरा प्रकट गर्दछ। उसको दृष्टिकोणबाट, तार्किक - बिना शर्त। यसका साथ उनी त्यो हासिल गर्न चाहन्छन उहाँको अनुकम्पा, उसको अनुकम्पा, दया, तपाईको जीवनको क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि तपाइँलाई डो to्याउनको लागि उहाँको अनुग्रहको बरदान हो। तपाईं यी सबै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मात्र येशू मार्फत। लिनुहोस् यो उपहार यो तपाईं पवित्र हुनेछ, कि, तपाईं ईश्वरवादी हुनुहुन्छ र उहाँ संग एक नयाँ जीवन बाँच्न। यो तपाईंको समझदार, तार्किक पूजा हो। बिना शर्त पनि, केवल उहाँको सम्मानको लागि, तपाईंको सबै विचार र कार्यहरूको साथ।
ख्रीष्टका अनुयायीहरू सताइनु र मारिने विश्वासको साक्षीको रूपमा जहिले पनि खतरामा छन्। तर यो मात्र होइन, उनीहरूलाई पंथ अनुयायीहरूको खिसी गरिन्छ, विशेष गरी धर्मीको रूपमा खिसी गरिन्छ र जीवनमा रोजगारीमा हाशिएमा गरिन्छ। यो दुखद सत्य हो। इसाईहरूसँग पावलले बोलेका थिए, जसले आफ्नो जीवन, उनीहरूको मायालु जीवनको माध्यमबाट उपासना गर्दछन्।
तपाईं कसरी अधिक समझदार हुन सक्नुहुन्छ। तार्किक उपासना जस्तो देखिन्छ?
के यो राम्रो प्रश्न हो? पावलले हामीलाई एउटा जवाफ दिन्छन्:
«र आफूलाई यस संसारको बराबरीमा नलगाउनुहोस्, तर आफैलाई नयाँ बनाएर आफूलाई परिवर्तन गर्नुहोस् ताकि तपाईं परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर जाँच्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् के असल, मनपर्ने र उत्तम छ» (रोमी :12,2:११)।
म तार्किक उपासना अनुभव गर्दछु जहाँ म येशूलाई चरण-दर-चरण मेरो जीवन परिवर्तन गर्न दिन्छु। भगवानले एक पटक हामीलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, तर बिस्तारै-बिस्तारै उसले तपाईंलाई तपाईंको पुरानो जीवनबाट मुक्त गर्दछ। यो रातोरात हुँदैन।
म अब यी साना कदमहरूमा बढी ध्यान दिन्छु जहाँ म मित्रता र आतिथ्य खेती गर्न सक्छु। जहाँ मसँग तपाइँले मलाई भन्न चाहानु भएको सुन्न समय छ, जहाँ म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छु र तपाईंसँग अतिरिक्त माइल जान सक्दछु। म स्वेच्छाले मेरो पुरानो आत्मलाई छोडिदिन्छु र मेरो साथी, येशूसँग समयको मजा लिदैछु।
मेरी प्यारी पत्नी, बच्चाहरु र नातिनातिनाहरु लाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन। मसँग अब तिनीहरूका खुला कानहरू र तिनीहरूका आशा र चिन्ताको लागि अधिक खुला हृदय छ। म मेरा छिमेकीहरूको आवश्यकताहरू राम्रो देख्छु।
« सन्तहरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुहोस् , आतिथ्य अभ्यास गर्नुहोस् » (रोमी :12,13:११)।
एक सानो वाक्य - एक ठूलो चुनौती! यो तार्किक उपासना हो , त्यो मेरो काम हो। म उनको वरिपरि धकेल्न सक्दछु आरामबाट, मानवीय तर्कबाट बाहिर। यसको तार्किक निष्कर्ष यस्तो हुनेछ: मैले आफ्नो समझदार उपासना सेवालाई पूरा गरेको छैन, परमेश्वरको इच्छालाई बेवास्ता गरेको छु र फेरि आफूलाई यस संसारको बराबरीमा राखेको छु।
अर्को तार्किक निष्कर्ष: म भन्न सक्दिन कि यो प्रक्रिया सजीलो र चाँडो भयो। कसरी गेत्समनी बगैंचामा येशूले भाडा गर्नुभयो। जब उनी पसिना आउँदै थिए र उनको पसिनाका थोपा रगत जस्तै लाग्थ्यो। The सन्तहरूको आवश्यकताको ख्याल राख्नुहोस्। आतिथ्य अभ्यास गर्नुहोस्। » यो सजिलो र बेवास्ता गरिएको उपक्रम होइन, यो तार्किक उपासना सेवा हो जसले हाम्रो pores बाट पसीना निकाल्छ। तर यदि मैले आफ्नो जीवनमा परिवर्तनमा ध्यान दिएँ भने, म आफूलाई अरूको खाँचोको लागि प्रेमको कारणले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले स्वीकार्न चाहन्छु। मेरो परिवर्तन अझै पूर्ण भएको छैन। येशू अझै मसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ र म खुशी छु कि म विभिन्न तरिकाले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छु।
सायद तपाईं गेत्समनी बगैंचामा येशू जस्तै हुनुहुन्छ। येशूले प्रार्थना गर्नुभयो र आफ्ना नजिकका चेलाहरूलाई सोध्नुभयो:
"प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि तपाइँ प्रलोभनमा नपर्नुहोस्" (लूका १:१:22,40)।
प्रार्थना बिना, येशूसँग घनिष्ठ सम्पर्क, चीजहरू राम्रोसँग चल्दैनन्। अतिथि सत्कार, समझदार पूजा तपाई र मेरो लागि कठिन मार्ग हुन सक्छ मह मात्र चाटेन। यसैले बुद्धि, मार्गदर्शन र सामर्थ्यको लागि निरन्तर प्रार्थना आवश्यक छ, किनकि यो रोमी १२:१२ को अन्तमा लेखिएको छ। पावलले अर्को बुँदा उल्लेख गरे:
Evil खराबीलाई नराम्रो नबनाऊ। सबैको लागि राम्रो हुन। यदि यो तपाईं सकेसम्म सम्भव छ भने, सबै व्यक्तिहरूसँग शान्तिमा रहनुहोस् » (रोमी .12,17.२18-२XNUMX)
तिनीहरू आफ्ना छिमेकीहरूसँग बस्छन्। उनीहरूले तपाईंलाई राम्रो पिनप्रिक्सहरू दिन्छन् जसले कोरमा चोट पुर्‍याउँछ। तपाईंलाई माफ गर्न गाह्रो लाग्न सक्छ। तिम्रो मुटु दुख्छ! यदि तपाईंले माफ गर्नुभएन र क्षमाको लागि माग्नुभएन भने, तपाईंको मुटु वर्षौं र दशकहरूमा दुख्छ। तपाईंलाई सोधिन्छ येशूको साथमा, मेरो नामबाट, मेरो हृदयको अन्तबाट माफ गर्नुहोस् र खराबीलाई भलाइको लागि बदला लिनुहोस्! अन्यथा तपाईले आफ्नो जीवन कठिन बनाउनु भएको छ र यति चोट पुर्‍याउनु भएको छ किन कि तपाई आफैंलाई तल सार्न सक्नुहुन्न। - forgive मैले माफ गरे, त्यसैले म शान्ति सिर्जना गर्दछु। म बिना शर्त यो पहिलो कदम चाल्छु! » येशूका भेडाहरूले उनको सोर सुन्छन्। तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ। तार्किक सेवाको रूपमा तिनीहरू शान्तिलाई पछ्याइरहेका छन्।
येशू पृथ्वीमा तपाईको शर्त बिना प्रेमको सेवा गर्न आउनुभयो। उहाँको उपासना सिद्ध छ। उनले आफ्नो बुबाको इच्छा अनुसार सिद्ध जीवन बिताए। के ईश्वरको इच्छा असल, रमाईलो र सही छ। येशू तपाईंको भलोको चाहना गर्नुहुन्छ।
प्रेमले तपाईंलाई तपाईंको जीवनको लागि सोचे जस्तो कार्य गर्न निर्देशन दिनुहोस्। यो तार्किक, बिना शर्त सेवा र उत्तर हो जुन परमेश्वरले आफ्ना प्रिय बच्चाहरूबाट आशा गर्नुहुन्छ। तपाईं एक्लै ईश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ, उहाँलाई आदर र धन्यवाद दिनुहोस्, र आफ्नो छिमेकीको सेवा गर्नुहोस्। तपाइँको उचित तर्कसंगत आराधना मा प्रभु धन्य हुन।